Home » Education Services » ၁၀ တန်းမြန်မာစာ guide ( မြန်မာစာဂုဏ်ထူးထွက်ထားသည်)
Address: Yangon တာမွေမြို.နယ် မေတ္တာညွန်.ရပ်ကွက် Wanatheingi Street အိမ်နံပါတ် ၅၁၆
Contact Number: 0943066623 0930091244
Email Address: superman.tt2011@gmail.com
Listed: June 12, 2014 9:05 pm
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးတစ်ခုတည်းသာ ပါခဲ.ပြီး..။
ဆရာကြီးဂုဏ်ထူးဦးသိန်းနိုင်၏ တပည်.ရင်းဖြစ်ပါသည် …။ စာစီစာကုံးရေးရာတွင် လိုအပ်သောတွေးခေါ်ချက်များကောင်းစေရမည်..။ ဘယ်လိုကျက်ကျက် အမှတ်မလျော.နိုင်သောစနစ်သင်ပေးမည်..။ လက်ရေးမလှသောလည်း မြန်မာစာဂုဏ်ထူးထွက်နိုင်ကြောင်း သင်ပြပေးမည်..။ သင်.ကလေးအား မြန်မာစာကို အောင်ချင် ဂုဏ်ထူးထွက်ချင်လိုလျင် ကျွန်တော်နှင်.အတူပညာရေးခရီးသို. စိတ်ချစွာ အပ်နှံပါ..။ ၇ ၈ ၉ တန်း မြန်မာစာပါ ပြနိုင်ပါသည်..။
Ad Reference ID: 27653999bce42fcc
၁၀ တန်းမြန်မာစာ သီးသန်. guide လုပ်မည်..။ tuition and class
Listed by: kaunggonhtin
Other items listed by kaunggonhtin
‘ Moe Min Htin’ Delivery Service
Latest items listed by kaunggonhtin »
All times are GMT 6.5. The time now is 1:28 pm.